सक्रिय संक्रमित एक महिना यताकै उच्च, विज्ञले दिए यस्तो चेतावनी - Nepalese Times
देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको यस्तो लिष्ट तयार ! (नामावलीसहित)3घण्टा अघि
भीम रावल नेतृत्वको एमाले कार्यदलको बैठक सकियो, के–के भयो निर्णय ?3घण्टा अघि
माधव नेपालले मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए यी ६ सांसदको नाम (सूचीसहित)6घण्टा अघि
के बुद्ध एअरको जहाज बिग्रिएकै थिएन ? घटनाको रहस्यबारे यसरी हुँदै छ अनुसन्धान ! (पत्रसहित)7घण्टा अघि
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई मन्त्री बनाइँदै, कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै ?9घण्टा अघि
देउवाको दूत बनेर कानून मन्त्री कार्की फेरि पुगे बालकोट, ओलीले यस्तो जवाफ दिएर पठाए ! 11 घण्टा अघि
आकाशमा दुई घण्टा फन्को मारेर सफल अवतरण गरेको त्यही जहाज आज विहानैदेखि संचालनमा ! 12 घण्टा अघि
७७ जनाको ज्यान जोगाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासँग रहेकी यी महिला को-पाइलट को हुन् ? (भिडियोसहित) 14 घण्टा अघि
नेप्लिज संवाददाता १६ श्रावण २०७८, शनिबार ०६:३७ (1 महिना अघि) १०२ जनाले पढ़िसके
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दैनिक ५ सयभन्दा धेरै संक्रमित हुने १२ वटा जिल्ला छन् ।
जसमा प्रदेश १ का मोरङ र सुनसरी बाग्मती प्रदेशका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशका नवलपरासीपूर्व रहेका छन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीलगायतका रहेका छन् ।
हेलचेक्र्याइँका कारण कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा जोखिम पुनः बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताउँदै आएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुन संक्रमणबाट बच्न स्वयं व्यक्ति आत्मानुशासित हुनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी मास्कको समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा पीसीआर तथा एन्टिजेन गरी १४ हजार ६ सय ६१ जनाको परीक्षण गरिएको छ । गत २४ घण्टामा ९ हजार ७ सय ८३ जनाको आरटी–पीसीआर विधिबाट र ४ हजार ८ सय ७८ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ ।
शुक्रबार देशभर २७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ । केही दिनयता गम्भीर संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
देशभरका अस्पतालमा ६ सय ८६ जना आईसीयू र १ सय ६१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । हाल देशभर ३ सय ९० जना क्वारेन्टाइनमा छन् । अहिलेसम्म ३५ लाख ९४ हजार २ सय २ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याकंमा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। कृष्ण पौडेलका अनुसार हालसम्म ९७ लाख ८२ हजार ८ सय ५० खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ । प्राप्त भएको खोपमध्ये १६ लाख २१ हजार ७ सय ५४ जनाले कोरोनाविरुद्धको पूर्ण खोप र ३७ लाख ७९ हजार ९ सय ३२ जनाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।
सरकारले आगामी असोजसम्म खोप लगाउन योग्य ३३ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको जनाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।